बैंकहरुको बित्तीय अवस्था सार्वजनिक कस्को नाफा घट्यो, कसले कति नाफा कमाए ? - Experience Best News from Nepal
१आजदेखि ‘गरुड पुराण’ प्रदर्शनमा
२सर्वाधिक ‘सेक्स’ खोज्नेमा नेपाल चौथो नम्बरमा ! जान्नुहोस् किन देश कति नम्बरमा
३‘किक २’ मा दिशा पटानी र सलमान खानको जोडी !
४यस्तो छ आज माघ ४ गते, शुक्रबार तपाईहरुको राशिफल
५२०१९ मा यसरी फर्किदै छन् रोनाल्डो पोर्चुगलको राष्ट्रिय टिममा !!
६कस्तो छ साउथ स्टार ब्रह्मानन्दमको अवस्था
७के सुनिल ग्रोबर ‘दि कपिलशर्मा शो’ मा फर्किदै छन् ? जान्नुहोस भित्री कुरो के छ ?
८लोन मै हिगोइन मिलानबाट चेल्सी जादै !!
बैंकहरुको बित्तीय अवस्था सार्वजनिक कस्को नाफा घट्यो, कसले कति नाफा कमाए ?
प्रकाशित मिति : सोमवार, कार्तिक २०, २०७४
काठमाडौ । सञ्चालनमा रहेका कुल २८ वटा बाँणिज्य बैकहरु मध्ये आज आईतबारसम्म १७ वटा बैंकले पहिलो त्रैमासिक बित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरेकाछन । यसरी बित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्नेहरु मध्येमा १० वटा बैक बैकहरुको नाफा बढेको भएपनि सात वटाको नाफा भने घटेको देखिएको छ।सम्वन्धीत बैकहरुले प्रकाशन गरेको अपरिष्कृत बित्तीय बिवरण अनुसार एभरेष्ट, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, राष्ट्रिय बााणिज्य बैक, सानिमा सहितका १० वटाले गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिको तुुलनामा चालुु आवको पहिलो त्रैमासमा नाफा बढेकाछन । तर सिटिजन्स ईन्टरनेशनल, हिमालयन, मेगा, बैैक अफ काठमाडौ, ग्लोवल आईएमई र सिद्धार्थको बैैकको नाफा भने घटेको छ ।
यस बिचमा सबै भन्दा बढी मुुनाफा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकले कमाएको छ । गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा ७४ करोड आठ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकले चालु आवको पहिलो त्रैमासिक ९१ करोड १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ ।
यसैगरी नबिल बैंकले पनि गत आवको असोज मसान्तमा ७९ करोड ८३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएकोमा चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा ८४ करोड २० लाख ५१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
हालसम्म बित्तीय बिवरण सार्वजनिक गर्नेहरु मध्येमा बढी नाफा आर्जन गर्नेमा तेस्रो स्थानमा परेको राष्ट्रिय बाँणिज्य बैकले यही असोज मसान्तसम्म ७० करोड ८७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा राष्ट्रिय बाँणिज्य बैकको यस्तो नाफा ५० करोड ८० लाख ३२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा सिटिजन्स ईन्टरनेशनल बैंकको खुद मुनाफा भने गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा तीन करोड रुपैयाँले घटेको छ । गत आवको असोजमा ३४ करोड ५१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको सिटिजन्सले यही असोज मसान्तसम्म ३१ करोड ९८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
यसबाहेक हिमालयन, मेगा, बैंक अफ काठकाडौको नाफा पनि गत आवको असोज मसान्तको तुलनामा चालु आवको असोज मसान्तमा दुई देखि छ करोड रुपैयाँसम्मले घटेको छ ।
कुन बैंकको नाफा घट्यो, कुन बैकको बढ्यो हेर्नुहोस तालिका (रकम रु हजारमा)
सुनको मूल्य ६० हजार नाघ्यो, कति छ आज ?
३ लाख भन्दा बढी लाइसेन्स छापिए, १५ दिनमा सबै छापिसक्ने !
के तपाई सुनचाँदी किन्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको भाउ ! जान्नुहोस्
६ दिन बैंक बन्द हुने, एटिएममा पैसाको कमी रहने
खुसीको खबर, ह्वातै घट्यो सुनचाँदीको मुल्य ! यस्तो छ आजको मूल्य
सुनचाँदी किन्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको नयाँ मूल्य !